Thenga iifowuni ezisezantsi ezingabizi kakhulu: ukubonelela kunye nezaphulelo kwiAmazon | I-Androidsis
Sebenzisa i-MWC 2019 ngokuthenga iifowuni eziphezulu ezinezaphulelo ezinkulu
UNerea Pereira | | Iiselfowuni, MWC
I-Mobile World Congress 2019 iza kuphela. Owona mboniso mkhulu weefoni ubuyindawo efanelekileyo ekusetyenzisweni kuyo uninzi lwabenzi ukuba babonise izisombululo zabo. Kwaye olu hlelo lwe-MWC luzele ziifowuni ezinokusongwa, ezinje nge prototype eyenziwa nguAlcatel ukungena ngokupheleleyo kwimakethi ye-smartphone eguquguqukayo. Eli lelona xesha lilungileyo loku Thenga iifowuni elona xabiso libalaseleyo.
Kwaye yile, uninzi lweempawu ezibonisa izizukulwana ezitsha zeeflegi zazo, zisebenzise eli thuba ukubonelela ngezaphulelo ezimnandi ezisimemayo bathenge iifowuni ngamaxabiso angenakubethwas. Kwaye asithethi ngee-smartphones ezilula, kodwa malunga nazo zonke izinto ezinjengeHuawei P20 onokuzithenga ngexabiso elingenakuthelekiswa nanto. Ngaphantsi kwama-euro angama-400!
Ewe inkampani yaseAsia isungule izibonelelo ezinomdla kakhulu, kodwa eyona nto ibalulekileyo sisaphulelo abasenzileyo ukuze sikwazi ukuthenga eyona fowuni intle kwintengiso ngexabiso elingenakubethwa. Jonga nje ngokukhawuleza kwifayile ye- Iimpawu zeHuawei P20 ukwazi ukuba sijamelene nesiphelo sendlela ephezulu: Iprosesa yaseKirin 970, i-4 GB ye-RAM, i-128 GB yokugcinwa kwangaphakathi, inkqubo yekhamera ezimbini kunye neLeica optics enikezela ngokubamba okuhle kunye nebhetri engenakuphela ngexabiso lehlazo: i-399 euros. Ewe kunjalo, isithembiso sesikhashana ke ungaphoswa lithuba ukuba awufuni kuphoswa yile ngxoxo. Kwaye ngaphezulu koko, ufumana isiciko sesipho!
Akukho mveliso ifunyenweyo»/]
Izibonelelo ezingakumbi zokuthenga iifowuni eziphezulu ngexabiso eliphantsi kakhulu
Enye ingxoxo ongenakuphulukana nayo sisibonelelo seAmazon esikuvumela thenga i-Honor 10 ngesaphulelo sama-25 epesenti. Sithetha ngesiphelo esine-5.84-intshi yesikrini kunye ne-HD epheleleyo isisombululo, iprosesa efanayo yeKirin 970, i-4 GB ye-RAM, i-64 GB yokugcina, inkqubo yeekhamera ezimbini ezinee-megapixels ezili-16 nezingama-24 ngokwahlukeneyo, ukongeza kwi-24 ikhamera yangaphambili ye-megapixel eya kuvuyisa abathandi be-selfie.
Kwaye kukho okungakumbi: ibhetri engapheliyo ye-3.400 mAh, inkqubo enamandla yokuvula ubuso kunye nombala wegradient oya kukwenza uthandane kwaye iya kuba kukujoliswa kwawo onke amehlo ngalo lonke ixesha ukhupha i-smartphone yakho entsha kraca. Kwaye ngoku ungathenga le fowuni nge-euro ezingama-299 kuphela. Ilungile ukuba kuya kufuneka uvuselele i-terminal yakho kwaye awufuni kushiya imali eninzi.
Umvelisi waseKorea naye ujoyina iqela ngokunikezela ngeflegi yangaphambili yosapho lweGlass S ngesaphulelo esingahlulwayo. Ewe, ngoku ungathenga i-Samsung Galaxy S9 nge-euro engaphantsi kwama-500. Lumka, inezinto ezinamandla okwenyani zokukwazi ukuhambisa nawuphina umdlalo okanye usetyenziso ngaphandle kokuphazamisa.
Ukuqala, idibanisa iprosesa ye-8-core Exynos, ukongeza kuyo Imemori ye-6 GB ye-RAM, I-64 GB yokugcina, ikhamera enamandla kunye nokuvula okungagungqiyo kugcino ukuthatha imifanekiso emangazayo kwaye engenanto yakwenza nomona kolu khuphiswano kolu luhlu, mammoth 6.2-intshi screen kunye ne-QHD + resolution, yiyo kuphela imodeli enetekhnoloji enjalo. Phambili apho sikubonise khona.
Ewe, iziboniso ze-2K ziluncedo kakhulu kwifowuni. Ngokukodwa ukuba sithathela ingqalelo ubunyani bendalo eyenziweyo yiSamsung kwiminyaka embalwa edlulileyo kwaye esivumela ukuba sonwabe Umxholo weVR kwi-Samsung Galaxy S9 ngomgangatho omangalisa ngokwenene. Kwaye ucinga ukuba ngoku unokufumana le modeli ngexabiso elinomtsalane, lukhetho olukhulu lokujonga ukuba ujonge ukuthenga iifowuni eziphezulu ezinezaphulelo ezinomdla.
Uya kubona ukuba le modeli yinguqulelo yaseNtaliyane ye-Samsung Galaxy s9, kodwa unokuqiniseka ukuba awuyi kuba nangxaki xa uyisebenzisa eSpain. Ewe, ineempawu ezifanayo nenguqulelo yelizwe lethu.
Isamsung SM-G960XZKAITV ...
Ewe kunjalo, kuya kufuneka ukhumbule ukuba zonke ezi zinto zibekelwe ixesha elilinganiselweyo, ke ukuba ufuna ukuthatha ithuba ngazo naziphi na izisulu ezikhoyo kolu luhlu, ungaphoswa leli thuba ngaphambi kokuba liphele.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » MWC » Sebenzisa i-MWC 2019 ngokuthenga iifowuni eziphezulu ezinezaphulelo ezinkulu
ILenovo Z6 Pro iya kuba yinkampani ye-5G yeflegi kwaye iya kuba nekhamera yeHyperVision
Itekhnoloji yokutshaja ye-44W Super FlashCharge iya kuhlawulisa iQOO ye-smartphone iye kwi-50% kwimizuzu nje eyi-16